युवापुस्तामा बढेको मदिराको लत, दिमागमा गम्भीर क्षति - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
युवापुस्तामा बढेको मदिराको लत, दिमागमा गम्भीर क्षति
३ मंसिर, काठमाडौं । फिजिसियन डा. रवीन्द्र पाण्डेले मदिराको अत्यधिक प्रयोगले कलेजो, आन्द्रा, मिर्गौला, स्नायु प्रणालीमा असर पर्ने बताए । मोटो शरीर भएका व्यक्तिले धेरै मदिरा सेवन गरेमा कोलेस्टोरलको मात्रा बढेर हृदयाघात हुने बताउँदै डा. पाण्डेले आँखाको शक्ति पनि कमजोर हुने बताए ।
उनले रक्सी प्रयोग गर्नुपरे पनि मासु, चिल्लो खानेकुरा वा पापडहरूसँग प्रयोग गर्न नहुने र फलफूल वा सलादसँग प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । जर्मन अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका अध्ययनमा पुरुषसरह नै रक्सी प्रयोग गरेमा महिलाको दिमागमा गम्भीर क्षति पुग्ने पाइएको खवर गोरखापत्रमा छ ।
Previousनिर्मला पन्त बलात्कार/हत्या प्रकरण : पुरानै आरोपितबारे फेरि अनुसन्धान
Nextबजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर उपत्यकाका सडकको बेहाल उस्तै